लगानी सम्मेलनले मुलुकमा लगानीकाे वातावरण बन्छ
परिवर्तन देवकोटा शुक्रबार, चैत १५, २०७५ मा प्रकाशित
काठमाडाैँ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको पूँजीबजार हो । विश्वका कुनै पनि अर्थतन्त्रमा पूँजीबजार खस्कियो भनेर आन्दोलन हुँदैन । पछिल्लो समय पूँजीबजारको स्थिती खस्कँदो छ । विगत तीन वर्ष यता पूँजी बजारमा सुधार आएको छैन । दुई तिहाईको सरकार गठन तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. यूवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि पूँजीबजारमा सुधार आउने धेरैको विश्वास थियो । तर सरकार गठनको एक वर्ष वित्दासम्म पनि पूँजीबजार सुध्रन सकेको छैन ।
विभिन्न दवाव समुहहरु गठन गरी लगानीकर्ताहरुले पूँजी बजार सुधारको माग राख्दै आन्दोलन तथा दवाबमुलक कार्यक्रमहरु राख्दै आईरहेका छन् । जसले जे जति गर्दा पनि पूँजीबजारमा प्रगति देख्न सकिएको छैन । लगानी सम्मेलनको मुखैमा लगानीकर्ता दवाव समुहले आन्दोलन गर्नु गलत भएको नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बताउँछिन् । पूँजीबजारमा देखिएका समस्या, विभिन्न लगानीकर्ता समुहहरुको दवावमुलक कार्यक्रमलगायत लगानी सम्मेलनको विषयमा केन्द्रित भई जनतापाटीका लागि परिवर्तन देवकोटाले अध्यक्ष पोखरेलसंग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
वर्तमान पूँजीबजारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विगत तीन वर्षदेखि पूँजी बजार खस्किरहेको छ । विभिन्न समयमा विभिन्न कारणहरुले गर्दा पूँजी बजार सुध्रन सकेको देखिँदैन । पूँजीबजारको अहिलेको समस्या भनेको समग्र २० लाख लगानीकर्ताहरुको हो । केही समयअघि मात्रै अर्थमन्त्रालयबाट एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसको सदस्य म पनि थिएँ ।
त्यसमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन गरेर ५८ बुँदे मागहरु हामीले राखेका थियौँ । त्यो अहिले पुरा हुने चरणमै छन् । कतिपय मागहरु पुरा भएको छ भने कतिपय पुरा हुँदैछन् । अझै कतिपय कुराहरु चाहिँ नियम संशोधन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । अब भने विस्तारै पूँजी बजार सुध्रनेमा हामी आशावादी छौँ ।
किन पूँजी बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ?
पहिला २२ खर्ब रुपैयाँको बजार थियो । विगत तीन वर्ष देखि नै लगातार पूँजी बजार घटिरहेको छ । पूँजी बजारमा अहिलेको मूख्य समस्या भनेको बैंक व्याजदर हो । हामीले ८ प्रतिशत बैंक व्याजदरमा लिएर लगानी गरेका हौँ । तर अहिले त्यो बढ्न गई १६ प्रतिशत पुगेको छ ।
८ प्रतिशतमा लगानी गरेको रकम अहिले निकाल्ने हो भने ३ प्रतिशत पनि बजारमा छैन । हामीले बैंक व्याजदर मात्रै लिएर लगानी गर्छौँ भने १६ प्रतिशतमा लिएर कसरी हामीले पूँजी बजारमा भित्र्याउन सक्छौँ त ? यो सँगसँगै राष्ट्र बैंकले २ अर्बबाट ८ अर्ब पु¥याउने निती लिएअनुसार त्यसले ८ अर्ब पुर्‍याउनको लागि धेरै राइट, बोनश आदि इत्यादी दिँदा शेयर भेलबाढी सरह आयो ।
अहिले तरलता अभाव छ, यो अभावसँगै सोच्ने संयन्त्र भएन । हामीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेट्दा पनि भनेका थियौँ, यो बजारमा यसलाई सोच्ने संयन्त्र आवश्यक छ । त्यसको लागी नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता धेरै कोषहरु छन्, यीनीहरुलाई मार्केट मेकरको रुपमा भित्र्याउनुपर्यो । चीन, बंगलादेशमा के देख्न सकिन्छ भने, बजार खस्कियो भने सरकारले नीति लिएर काम गरेको हुन्छ । सरकारले नीति लिएर मार्केट यहाँसम्म पुग्दा तिमीहरुले किनीरहनु, मार्केट धेरै माथि गयो भने किनेर ठिक्क ठाउँमा राख्ने भन्छ । त्यस्तै नीतिनियम बनाईदिए बजार एक रुपले चल्छ ।
पूँजी बजार सुधारको माग राख्दै लगानीकर्ताकै एउटा समुहले आन्दोलन गरिरहेको छ, लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भैरहेको यस्तो आन्दोलनलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
हुन त उहाहरु पनि पुँजीबजारकै हकहितको लागि लाग्नु भएको छ ! सवैको साझा माग नै पुँजीबजारको हित हो ! तर अहिलेको आन्दोलन बेमौसमी बाजा हो । अहिलेको परिबेसमा आन्दोलन गरिरहनु पर्ने छैन । पूँजीबजारलाई सुधारको निमित्त नेपाल सरकार लागि परेको छ । मा. अर्थमन्त्री डा. यूबराज खतिवडाज्यूले बनाउनु भएको उच्च स्तरीय कार्यदलमा म स्वयमं सदस्य छु । हामिले अर्थ मन्त्रालयलाई ५८ बुदे सुझाब पेस गरेको छौ । कति पुरा भैसकेका छन भने कति कार्यान्वायनकै चरणमा छन । अल्पकालिन मद्धकालिन र दिर्घकालिन गरेर वनाएको प्रतिबेदन पुरा हुन एकैचोटि सम्भब हुने कुरा पनि छैन ! किनकि कति कुरा संसोधन नै गर्नुपर्ने हुन्छ र समय सँगै पुरा हुनेछन् ! हुन त पुँजीबजारमा अझै पनि धेरै छन् सुधार गर्नुपर्ने र यो पुरा गराउन हाम्रो संघ अहोरात्र लागिपर्नेछ !
तर के यसरी आन्दोलन गर्दैमा पुँजीबजारको सुधार हुन्छ र ?
नजिकिदै गरेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा यसरी बितण्डा मच्चाउनु भनेको लगानीकर्ताकै दुर्भाग्य हो । हाम्रो संघ सदैव लगानीकर्ताको हक हितको लागि अहोरात्र लागिपर्नेछ । तर यस प्रकारले लाग्ने छैन । यसरी हुदैन सहमति सहकार्य र एकता बाट नै सबै निकास निस्कन्छ । जोश मात्र ले पनी हुदैन । समयमा होस पनी पुर्याउन सक्नु पर्छ ।अहिले त सरकार लाई सहयोग गर्ने बेला हो । आन्दोलन हैन ।
पाहुना लाई घर को छिद्र खोल्नु बुद्धिमानी हुदैन होला जस्तो लाग्छ । अहिले लगानीकर्ताहरुले विभिन्न दवाव समुह खोली आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । खासमा उनीहरुको दर्ता नै भएको छैन । जे भएपनि उनीहरुले पूँजी बजारकै विकासको लागि आन्दोलन गरेका हुन् । तर पनि आन्दोलन चाहिँ सरासर गलत छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यसरी आन्दोलन गरिरहनुलाई म उचित ठान्दिन । आफ्नो घरभित्र केही कुरामा झगडा भयो भने पहिले त्यो मिलाउने की विदेशीलाई सुनाउने ? विदेशी लगानीकर्ताहरु आउने समयमा यस्तो गरियो भने त पक्कैपनि विदेशीले लगानी त गर्दैन । यसमा हाम्रो विमति छ । अहिलेको समयमा आन्दोलन गरिरहनुे बेमौसमी बाजा बजाउनु जस्तै हो ।
आजबाट हुने लगानी सम्मेलनले पूँजी बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
पहिला पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुले हामी यति लगानी गर्छौँ भनेर जानुभयो । तर लगानी भनेजस्तो भित्रिएन । प्रतिवद्धताहरु धेरै भए, लगानी भने कमै भित्रिए । अहिले पनि त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ । अहिले लगानीकर्ता दवाव समुहले पनि आन्दोलन गरिरहेको छ । उता, नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको गतीविधी पनि लगानी भित्र्याउनका लागि सकारात्मक छैन ।
यस्ता गतिविधिहरु रोकेर लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्नु वा विश्वस्त पार्नु अहिलेको मुल आवश्यकता हो । यो देशमा यस्तो छ भनेपछि कसैले पनि लगानी गर्न तत्परता देखाउँदैन । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको पूँजी बजार हो । विश्वका कुनै पनि अर्थतन्त्रमा पूँजी बजार खस्कियो भनेर कतैपनि आन्दोलन हुँदैन । हाम्रो देशमा यसरी आन्दोलन चर्किरहेको छ । यसले राम्रो संकेत देखाउँदैन । म आन्दोलनरत समुहलाई भन्छु, पूँजी बजार सुधारका कामहरु भैरहेकै छन्, लगानी सम्मेलन, लगानी भित्र्याउने जस्तो संवेदनशील विषयलाई असर पार्नेगरी आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक छैन । आन्दोलन रोक्नुहोस् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाज्यूले लगानी सम्मेलनमा नेपालको सेयरबजारलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउनु भएको छ । सेयरबजारमा बैकल्पिक लगानी भित्र्याउने र लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा सेयर बजार परोस भन्ने उदेश्यले लगानी सम्मेलनमा पुंजीबजारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले छोटो समयमै थुप्रै कानुन निर्माण गरेको र केहि आवश्यक कानुन समेत ल्याउन नेपालमा लगानीको वातारण रहेको र सरकारले पनि राम्रो काम गरेको भन्दै सबैलाई लगानी सम्मेलनलाई सघाउन आग्रह गर्दछु ।
सरकारले पूँजीबजारमासमेत सँस्थागत विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने व्यवस्था गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
पहिला कमाउने र नाफा बाहिर लैजान नमिल्ने थियो । तर अहिले सरकारले ऐन संशोधन गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने तथा केही प्रतिशत नाफा बाहिर लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो एकदम राम्रो कुरा हो । सरकारको यस कदमबाट हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरु खुसी छौँ । उत्साही छौँ । हाम्रो संघले यसको जोडदार स्वागत गर्दछ ।
अहिलेको परिवेशमा पूँजी बजारमा लगानी जुटाउन के गर्नुपर्ला ?
सेयर बजारलाई प्रभाब पार्ने प्रमूख तत्व भनेको बैंक तथा बित्तिय संस्थाले दिने ब्याज दर हो । बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज धेरै पाईन्छ भने लगानीकर्ताले सेयरमा लगानी गर्दैनन । अर्को कुरा सेयर कर्जामा ब्याज महगो हुदा पनि यो बजारलाई प्रभाब पर्ने नै भयो । साथै देशको राजनितिक अवस्था , तरला, ऐन नियमहरु , नियामक निकायबाट समय समयमा जारी हुने निर्देशनहरु लगाएतले समेत यो बजारलाई प्रभाब पारिरहेको हुन्छ ।
मुख्य कुरा पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको लागी बिश्वाशको बातावरण सृजना हुनु पर्‍यो । कुनै कम्पनीले प्राथमिक निश्काशन गर्दा त्यो भन्दा धेरै गुना आवेदन पर्नुले लगानिकर्ताको लागी पुँजी बजार ठुलो आकर्षणको क्षेत्र रहेको प्रष्ट हुन्छ। बैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा आएको धेरै भयो तर लगानीको प्रतिफल आफु रहेको मुलुक लैजाने सम्बन्धमा स्पष्ट निती बनेको छैन ।96
तीन वर्ष यता पूँजी बजार निकै नै खस्किरहेको अवस्थामा लगानी गर्न त जोखिम होला नी ?
खर्बौँ रकम डुबेको भन्ने अवस्था छ । तर पनि यो के हो भने, मैले शेयर बेच्दा कागजमा मात्रै घटबढ हुने भयो । लगानी कर्ताहरु झनझन आत्तिने भए । के हुन्छ भन्ने भयो । आज बेचौँ भोली झन् सस्तो मा आउँछ भने भोली किनौँला भन्ने भयो । हो, यसै कारणले गर्दा पूँजी गुम्न पुग्यो । बाहिर त गएको हैन, यहिँ गुम्यो तर हामीले नबेच्ने हो भने यो कागजमा मात्रै गुम्ने हो । एकदम अप्ठ्यारो परेछ भने त बेच्नुपरिहाल्छ । त्यसैकारण पनि मैले भन्दै आएकी छु, घाँटी हेरेर हाड निलौँ । आफुले सक्ने रकम मात्रै पूँजी बजारमा भित्र्याउने हो भने त घाटा भन्ने त हुँदै हुँदैन नि । राम्रो कम्पनीलाई हेरेर लगानी गर्ने हो भने राम्रो छ ।
पूँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डले के गर्नुपर्छ ?
धितोपत्र बोर्ड लगानीकर्ताहरुको, पूँजीबजारको अभिभावक हो । अभिभावककै नाताले पनि त धेरै कामहरु गर्नुपर्यो । त्यसमा पनि पहिलेभन्दा धेरै कामहरु बोर्डले गरिरहेको छ । पहिले चाहिँ सुस्त नै थियो । लगानीकर्ताहरु पनि पूँजी बजारमा केही हुने बित्तिकै उहाँहरुलाई घच्घचाईरहेकै छौँ । बोर्डले काम नै नगरी बसेको त छैन ।
जुन समय थियो एउटा, लगातार तीन वर्षसम्म बजार घटिरहँदा पनि केही नबोल्दिने र बजार बढिरहेको अवस्थामा विज्ञप्ती निकालीदिने त्यस्तो गर्दाखेरी अलिकति नराम्रो भएको छ । तर पनि बैंकमा ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा छ । ति कुराहरु पनि समयमै ल्याईदिए सहज हुन्छ । त्यस्तै अहिले ब्रोकरलाई शाखा दिएर विभिन्न ठाउँमा पु¥याईएको छ । यसको लागि पनि पहल गर्दैछौँ हामीले । आजै या भोलि नै हुने काम त उहाँहरुले पनि गर्नुभएकै छ । तर नियम नै संशोधन गर्नुपर्दा त समय लाग्छ नै ।
पछिल्लो समय पूँजी बजारमा महिलाको उपस्थिती कस्तो रहेको छ ?
पहिले भन्दा त पूँजी बजारमा महिलाको उपस्थिती राम्रो नै रहेको छ । म अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडी म सामान्य लगानी कर्ता नै थिएँ । त्यो समयमा म २/३ ठाउँमा गएँ । त्यतिखेर मैले सानो उमेरको लगानीकर्ता बने । मलाई भन्थे, तपाई पनि अहिलेदेखि नै आउनुभएको छ, भोली हाम्रो उमेरमा त तपाईले के गर्नुहोला भनेर भन्नुहुन्थ्यो ।
सुरुमा मलाई पूँजी बजारको त्यति जानकारी पनि थिएन । तर विस्तारै विस्तारै लगानी गर्दै, काम गर्दै गएँ । पछि समय राम्रो भयो । अहिले गृहृणीहरुका लागि पनि पूँजी बजारमा लगानी राम्रो छ । थोरै थोरै रकम मात्रै लगानी गर्ने, राम्रा राम्रा कम्पनीबारे बुझ्ने र लगानी गर्ने हो भने राम्रो छ ।
अन्तमा, पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ लगानीकताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यदि तपाईंलाई कुनै सेयर राम्रो लाग्छ भने त्यसमा बढीमा १० प्रतिशत मात्र लगानी गर्ने गर्नुस । मलाई घाटा भइरहेको छ, तर चिन्ता छैन, कारण म एक लङ टर्म इन्भेष्टर हुँ । सेयर बजारबाट पैसा कमाउने एउटै मन्त्र हो, यसवाट भाग्दै नभाग्नुस । म पैसाको लागी काम गर्दिन , तर पैसा मेरो लागी कडा मेहनत गर्छ । आफुसंग भएको धातु सुन हो कि हैन आफैले चिन्न सक्नुपर्छ । बजारमा पित्तलको भाउ घट्न लागेको हल्ला सुनेर आफ्नो सुन पित्तलको भाउमा बेच्न हतारिनु लगानीकर्ताकै बेवकुफी हो । त्यसैले सेयर वजारमा प्रवेश गर्नु पूर्व अधिक जानकारी लिने , अनुभवि लगानीकर्ता एवं सेयर बजार विश्लेषकहरु संग राय सल्लाह लिने । आर्थिक न्यूजहरुमा आँखा डुलाउने ।
आफुलाई कंम्पनीको फन्डामेन्टल , संचालकहरु , आर्थिक कारोवार , आदि राम्रो लागेको छ भने एकै पटक भएभरको पैसा नखन्याउनु हुन र विस्तार विस्तार किराना पसलेले समान थपे जसरी थोरै थोरै किन्दै वुझ्दै जानु हुन म सुझाव दिन चाहन्छु । अन्तमा हाम्रो सरकारले सेयरबजार मैत्री निती नियम हरु समयमै वनाई दिने हो भने यो विजनेशलाई टक्कर दिने अरु विजनेश हुनेछैन र सन्सारका अर्व पतिहरुलाई हेर्नुहुन्छ भने १० जनामा ८ जना अर्वपति सेयरकै विजनेशले भएका छन् ।